I-Iron Cage - I-Theory ye-Max Weber ye-Rationality
Sciences soLuntu Iingcamango eziPhambili
Ukuqonda i-"Iron Cage" kaMax Weber
by UNicki Lisa Cole, Ph.D.
Inkcazo kunye neNgxoxo
Enye yeengcamango zengqondo uMax Weber, osungula isazi senzululwazi , owaziwa kakhulu ngokuba "yintsimbi yensimbi." Uber uqale wabonisa le ngqungquthela kwimisebenzi yakhe ebalulekileyo kunye nokufundiswa ngokubanzi, i -Protestant Ethics and Spirit of Capitalism , nangona kunjalo, wabhala ngesiJamani, ngoko akazange asebenzise le nkulumo ngokwakhe. Kwakuyi- American sociologist uTalcott Parsons eyayibumba, ekuguquleleni kwakhe kwasekuqaleni kwincwadi ka-Weber, eyapapashwa ngo-1930.
Kwimisebenzi yasekuqaleni, u-Weber ubhekisele kwi- stahlhartes Gehäuse , eguqulelwe ngokoqobo ngokuthi "indlu enzima njengensimbi." Inguqulelo kaParson "kwi-cage yensimbi," nangona kunjalo, iyakwamukelwa njengenguqu echanekileyo yesalathiso esinikwe nguTeber.
Ukuqonda i-Iron Cage ye-Weber
Kwi -Protestant Ethics and Spirit of Capitalism , u-Weber wanikela ngengxelo yembali ephandwe yinkcazo yendlela amaProtestanti aqineleyo asebenza ngayo kunye nenkolelo yokuphila ngokunyanisekileyo ekuncediseni ekuphuhliseni inkqubo yoqoqosho lwe -capitalist kwilizwe leNtshona. U-Weber wachaza ukuba njengoko amandla aseProtestanti ayehlile kwimpilo yoluntu emva kwexesha, inkqubo ye-capitalism yahlala, njengoko kwakunjalo isakhiwo sentlalo kunye nemigaqo ye-bureaucracy eyaye yavela kunye nayo. Olu lwakhiwo lwezenzo zoluntu, kunye nezithethe, iinkolelo kunye neembono zehlabathi ezixhasa kwaye zizinzileyo, zaba ngundoqo ekubunzeni ubomi boluntu.
Yona yinto enje into esiyiyole u-Weber njengentsimbi yesinyithi.
Ukubhekisela kule ngcamango kuza kwiphepha 181 yeenguqulelo zeParsons. Ithi:
UmPuritan wayefuna ukusebenza kumbizo; siyanyanzelwa ukuba senze njalo. Kuba xa ukuxhatshazwa kwenzelwa iiseli zamasonto kwimihla ngemihla, kwaye kwaqala ukuziphatha ngokubaluleka kwehlabathi, yenze inxaxheba ekwakheni i-cosmos enkulu yezoqoqosho zanamuhla. Lo myalelo ngoku ubophelelwe kwimibandela yobuchwepheshe kunye nezoqoqosho yomveliso womshini okwangoku ubeka ubomi babo bonke abantu abazalelwa kule ndlela , kungekhona kuphela abo bachaphazelekayo ngokuthengwa kwezoqoqosho, ngamandla angenakuphikiswa. Mhlawumbi kuya kubenza baqikelele kude kubekho itoni yokugqibela yelahlekile. Ngombono kaBaxter ukunakekelwa kweempahla zangaphandle kufuneka kulale kuphela kumahlombe 'ongcwele njengengubo ekhanyayo, engaphoswa ngasiphi na ixesha'. Kodwa isigwebo sathi isigqubuthelo sifanele sibe yintsimbi yesinyithi . "[Ugxininiselelweyo wongezwa]
Ngokucacileyo, u-Weber ubonisa ukuba ubudlelwane bezobuchwepheshe kunye noqoqosho obulungiselele kwaye bukhulile kwimveliso ye-capitalist baba yinto ebalulekileyo emphakathini. Ngaloo ndlela, ukuba uzalwe kuluntu oluhlelelwe ngale ndlela, kunye nokwahlukana kwezabasebenzi kunye nesakhiwo esinobuchule bezentlalo esiza nayo, awukwazi ukunceda kodwa uhlala ngaphakathi kule nkqubo. Ngaloo ndlela, ubomi bomntu kunye neembono zehlabathi zifakwe ngolu hlobo kangangokuthi mhlawumbi umntu akanakucinga nokuba yintoni enye indlela yokuphila ebonakala ngayo. Ngoko, abo bazalwa emgodini baphila ngokusemthethweni, kwaye ngokwenza njalo, bavelise i-cage ngokuqhubekayo. Ngenxa yeso sizathu, u-Weber ubhekele ukuba inqaba yensimbi yothintelo olukhulu kwinkululeko.
Kutheni ama-sociologists ayamkela i-Weber's Iron Cage
Le ngcamango yaba luncedo kakhulu kwi-theorists yoluntu kunye nabaphandi ababesilandela u-Weber. Okubaluleke kakhulu, i- theorists ebalulekileyo ehambelana nesikolo saseFrankfurt eJamani, ababenomsebenzi phakathi kwekhulu lemashumi mabini, bachazwe ngale ngcamango. Babona ubungqina obuthile bezobuchwepheshe kunye neempembelelo zabo kwimveliso yenkcitho-mali kunye nenkcubeko kwaye yabona ukuba oku kuphela kwandisa ubuchule benkampani yesinyithi ukuba ibume kwaye bomelele ukuziphatha kwethu nokucinga.
Ingcamango ka-Weber ihlala ibalulekile kubahlali bezenzo namhlanje ngenxa yokuba i-iron cage yengcamango ye-techno-rational, izenzo, ubudlelwane kunye ne-capitalism- ngoku i-system yehlabathi- ayikho imiqondiso yokuphazamisa nayiphi na ixesha kungekudala. Impembelelo yale ndlu yensimbi ikhokelela kwiingxaki ezinzulu kakhulu ezenzululwazi zentlalo kunye nabanye ngoku ziza kulungiswa. Ngokomzekelo, sinokuyinqoba njani amandla esiteji sensimbi ekujonganeni nosongelo lweenguqulelo zemozulu , oluveliswe yile cala ngokwalo? Kwaye, sinokuqiniseka njani abantu ukuba inkqubo engaphakathi kwenkango ayisebenzanga ngentshisekelo yabo, ibonakaliswe ukungalingani kobutyebi obudibeneyo obuhlula iintlanga ezininzi zeNtshona ?
Imbali yoBukhulu boBugcisa
Inkcazo ye-Sociobiology Theory
Ukufumana iisampula zoPhando
ICluster iSampula kwi-Sociology Research
Iimpawu zokuPenda nge-Acrylic yePaintening Paint
Yintoni 'i-Torque' kwaye Ngaba ibalulekile ekukhetheni iShaft efanelekileyo?
Indlela yokubala i-7 Izindleko zeNdleko
UBill uza kuVimbela Ubunini beZiko loMzimba
"Abaposisi" kunye namaQuranist
MercyMe - I-Biography ye-Christian Pop / Contemporary Band
Amanqanaba okuFunda ngokuphumelelayo
Izicwangciso zokukhuthaza abantu kunye neMizekeliso eZixhasa
Funda ii-6 ii-Butterfly Families
Imfazwe YaseMerika: iMfazwe yaseAtlanta
Funda indlela yokwenza i-Winform kwiC # Tutorial
Ray Boltz Biography
Funda indlela yokudibanisa "Umqhenqo" ngesiFrentshi uze uthi "Ukukhutshwa"
Ngamahlwempu, iPore, kwaye uthele
Umlando omfutshane woMbutho woLuntu woKhubazeka eMelika
I-T4 (Ingxelo yomvuzo ohlawulwayo)
Ngubani Owehla Umhla Womhlaba?